HS:- Magaalada Cadaado oo la go'aamiyey inuu ka dhaco shirweynaha gobolada dhexe ayaa waxaa ka socda u diyaar garow iyo marti gelinta shirkaas.
Hadaba shirkaas ayaa sida ay beesha caalamka saxiixday waxuu ujeedadiisu yahay sidii gobolada dhexe loogu sameyn lahaa Maamul goboleed ka kooban Mudug iyo Galgaduud oo xili horey iyagoo hal gobol isku ah la kaka jaray hadane dib leyskugu soo celiyey.
Shacabka gobolada dhexe oo hada u muuqda kuwo la jaanqaaday siyaasada dalka ayaa iyagu isku diyaarinaya sidii ay u dhisan lahaayeen Mudug State of Somaliya waxeyna u muuqataa xoog la adeegsayaa iyo xeelad la adeegsayaaba in aan sinaba loo kala jareyn gobolka Mudug waayo dalka waxaa ka soo socda 7 State Mudugna waa mid ka mid ah sidaasi daraadeed ma dhaceyso Mudug ayaa qeybna gobolkii Majeerteniya oo ayisku fac ahaayeen hoos tageysa qeybna iyadoo nus gobol ah noqoneysa maamul goboleed.
Adeer waxaan kuu cadeynayaa maalinta afkooda si rasmi ah loog amaqlo madaxweynaha, gudomiyaha baarlamaanka iyo R/wasaare Cabdiweli oo isagu isleh Puntland Daarood ahaan ku qanci in gobolka Mudug oo kala maqan uu noqon karo maamul goboleed federal inuu Soomaaliya ka hirgalo iska iloow, aduunyada oo fadhisa ayaa saxiixday in Mudug iyo Galgaduud oo horey looga jaray ay dib iskugu laabtaan.
Sida muuqata Dalka Soomaaliya federal kama soo dhawa waxaana degaano badan laga garaacayaa durbaano been ah maamulkii Juba ee dhawr bilood ka hor la buun buuniyey markii uu waqtigii kumeel gaarka ahaa ka dhamaaday waa kuwan hadeer isku diyaarinayo iney magaalada Ksimaayo ka qaxaan oo dagaal lagala wareegayo magaaladaas uuna wax ka ogyahay r/wasaraha lagu hayo.
Waxaa sidoo ale ka sii daran maamulka Juba fashilkiisa waxuu soo deg degay kedibmarkii Puntland oo ay isku haleynayeen ay la soo deristay guul daro siyaasadeed is xig xiga ilaa magaalada Garoowe ay idaacada iyo Tv-keda la wareegaan ciidamo beeleedyo hubeysan waxeyna hada magaalada u kala xiran tahay taageerayaasha madaxweynahii hore ee Puntland Faroole iyo Cabdiweli Gaas oo doonaya inuu xafiisyada maamulka ka wada qaado.
Isku soo duuboo Soomaalida waxy tiraahdaa I arkaay I arkaay waxaa ku xiga I qarshaay ilaa hada xalka federalka ma muuqdo waxaa la doonayey in sadbursi wax lagu helo arintiina wey suuroobiweysay.
· admin on August 10 2014 13:53:01 · 0 Comments · 1345 Reads ·
14,934,274 unique visits